स्त’न मा’ड्दा महिलालाई हु’न्छन य’स्ता अनौठो फा’इदा” जानी राखौ ! – Life Nepali
स्त’न मा’ड्दा महिलालाई हु’न्छन य’स्ता अनौठो फा’इदा” जानी राखौ !
काठमाडौं । महिलाहरुले आफुलाई फिट राख्नको लागि अनेक मेहनत गर्छन । महिलाहरु आफू सुन्दर हुनका लागि ब्युटिपार्लर जान्छन् । फेसियल, स्क्रब र विभिन्न खाले अनेक उपाय अपनाउँछन् । आफ्नो स्वास्थ्यको लागी महिलाहरु जिम जाने, योगा गर्ने र स्वस्थ खाना खान्छन् । तर, आफ्नो स्त’नलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्नेमा अनभिज्ञ नै छन् र खासै केहि पनि गरेको देखिदैन । ”” **** **थप समाचारको लागी **थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,
स्त’न मसाजमात्रै यौ’न सामथ्र्यको लागि मात्र नभएर विभिन्न स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्ने अध्यनबाट खुल्न आएको छ । जब महिलाहरुले कसिलो लुगा विशेषगरी ब्रा लगाउँछन तब ब्रे’स्टमा लिम्फैटिक फ्लुइडको काममा रोकावट आउँछ । जसले गर्दा ब्रेस्ट र अन्डर आम्र्समा भएको लिम्फ वा लसीका फ्लुइडलाई फेरी स्टिम्युलेट गर्नका लागि स्त’न मसाज गर्नु आवश्यक छ । कहिलेकाहीं स्त’नमा गाँठो बन्न जान्छ यो आफैलाई थाहा हुँदैन ।
पछि त्यही गाँठो विस्तारै क्यान्सरमा परिणत हुन्छ । नियमित स्त’न मसाज गर्यो भने आफैले गिर्खा वा गाँठो समयमा नै पत्ता लगाउनाले तुरुन्त उपचार भई ख’तराबाट बच्न सहज हुन्छ । स्त’न मसाजमात्रै यौ’न सामथ्र्यको लागि मात्र नभएर विभिन्न स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्ने अध्यनबाट खुल्न आएको छ । बदामको तेल, तिलको तेल, जोजोबा आयल वा क्यास्टर आयलले स्त’न मसाज गर्नु बढी फाइदाजनक हुन्छ ।
यस्तै, नुहाइ सकेपछि हातमा तेल लगाएर हातले स्त’न माथी गोलाकारमा मसाज गर्नुहोस् नुहाउन चाहानुहुदैन भने स्त’नलाई तातो तौलिया राखेर हल्का तातो गनुहोस् , मसाजको मोशनलाई कम से कम ३० पटक सम्म माथी र तलको दिशामा पनि गर्नुपर्छ । यति नै भन्ने छैन तर १० देखि १५ मिनेट हरेक दिन सुत्नु भन्दा पहिले दुध माड्नु लाभदायक हुन्छ । दुध माड्दै यौ’न स’म्पर्क गर्दा पनि धेरै कुराको लाभ हुन्छ । एजेन्सी
Previous कोरोना भाइरस कहिले अन्त्य हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा , WHO को आयो यस्तो जवाफ –
Next विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुका लागि आयो यस्तो खुसिको खबर –